सत्तारुढ सांसदको आरोप– लकडाउन भन्या दुई चार जनालाई महाराजा बनाउन्या भन्या हो? - Dainik Online Dainik Online
सत्तारुढ सांसदको आरोप– लकडाउन भन्या दुई चार जनालाई महाराजा बनाउन्या भन्या हो?
प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७७, सोमबार ६ : ११
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले प्रधानमन्त्री, केही मन्त्री र सिडिओहरुलाई महाराजा, प्रदेश राजा र टाकुरे राजाहरु भएको आरोप लगाउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले लकडाउनको नाममा प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्री र ७७ जिल्लाका सिडिओहरुलाई महाराजा, राजा र छोटे राजा बनाइएको आरोप लगाउनुभएको हो।
आफूले लकडाउनको परिभाषा नबुझेको भन्दै सांसद महतले जनतालाई पीरमर्का दिनलाई लकडाउन गर्या हो? भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो।
‘लकडाउनको परिभाषा मैले बुझिनँ सभामुख महोदय,’ सांसद महतले भन्नुभयो, ‘लकडाउनले ७७ जिल्लाका सिडिओ टाकुरे राजा भएका छन्। ७ वटा प्रदेश राजा भएका छन्। गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय महाराजा भएर बस्या छन्। जनताको पीरमर्का सुन्या छैनन्। जनतालाई यति पीर पर्या छ कि? जनतालाई पीरमर्का दिनलाई लकडाउन भन्या हो?’
सांसद जिल्ला जाँदा सिडिओको चाकडी गर्नुपर्ने, गृहमन्त्रालय धाउनुपर्ने भन्दै सांसद महतले सभामुखलाई पनि बाँकी राख्नुभएन।
‘एउटा माननीय जिल्लामा जानलाई सिडिओलाई चाकडी गर्नुपर्छ। गृहमन्त्रालय धाउनुपर्छ, सभामुखज्यूको फोन उठ्दैन।’
सांसद महतको आक्रोश त्यत्तिमै रोकिएन। एउटा माननीय जिल्लामा जान पाउँदैन। एउटा सामान्य फूली भएको मान्छे (पुलिस)ले तिम्रो लोगो चिन्दैन, सिडिओको आदेश चाहिन्छ भनेर थर्काउँछ। यो के गर्न खोजेको हो? के यसैलाई लकडाउन भन्छन्?’
लकडाउनले जनता भोकभोकै मर्ने स्थिति आउने भन्दै सांसद महतले लकडाउन कसैलाई महाराजा र टाकुरे राजा बनाउनका लागि नगर्न अनुरोध गर्नुभयो।
उहाँले जनतालाई परेको वास्तविक पीरमर्का बुझेर लकडाउनको तरिका बदल्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो।